"युवा संघ मधेस गयो, राजेन्द्र महतो दिल्ली पसे"-राजिव पहारी (अध्यक्ष, युवा संघ, नेपाल) - Asian Samachar
“युवा संघ मधेस गयो, राजेन्द्र महतो दिल्ली पसे”-राजिव पहारी (अध्यक्ष, युवा संघ, नेपाल)
Asian Samachar सोमवार, पुस २५, २०७३ (11 months ago) अन्तर्वार्ता
युवा संघ नेपाल एमालेको महत्वपूर्ण जनवर्गीय संगठन हो । मधेसमा एमालेको शाख गिर्दैछ भन्ने अड्कल गरिएका बेला पछिल्लो समय मधेसमा युवा संघको सक्रियता, सविधान संसोधन विधेयक विरुद्धको आन्दोलन ,एमालेमाथि सतापक्षले लगाउने गरेका आरोप, पार्टी अध्यक्ष केपी अली र एमालेका अडानहरु, युवा आन्दोलन ,युवा संघको आन्तरिक जीवन लगायतका विविध विषयमा युवा संघ नेपालका अध्यक्ष राजिव पहारीसंग एशियन समाचारका लागि नरेश न्यौपानेले गरेको कुराकानी:
संविधान संसोधनका विरुद्ध यूवासंघ नेपालले संञ्चालन गरिरहेको आन्दोलन सेलाउँदै गैरहेको हो ?
आन्दोलन सेलाउने होइन की बरु झन सिर्जनात्मक र रचनात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको हो । भारतको इशारामा नेपाललाई सिक्किमिकरणको बाटोमा लैजान खोज्ने लेन्डुप दोर्जेहरुलाई परास्त नगरी युवा संघले गरिरहेको आन्दोलन रोकिदैन । हामीले आम जनतालार्इ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एकातृत गर्ने र नेकपा एमालेले लिइरहेको अडानबारे तथ्य कुरा जानकारी गराउने उद्देश्यले विभिन्न छलफल ,भेला,अन्तरक्रियाहरुको आयोजना गरिरहेका छौ ।
पछिल्लो पटक युवासंघले मधेसतिर आफ्ना गतिविधीहरु केन्द्रित गरिरहेको छु । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानको संसोधन नभएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । ७५ वर्षदेखि नेपाली जनताले राजनैतिक आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ऐतिहासिक र महान् उपलब्धि नै यो संविधान हो । अथवा हालसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरुको उपलब्धी संस्थागत गर्ने बेला हो यो । तर, संविधानको कार्यान्वयन छोडेर विदेशीको इशारामा संसोधनको बेमौसमी बाजाका रुपमा ल्याएका छन् । हो, यसैको विरोधमा हामी छौ तर, हाम्रो आन्दोलन रचनात्मक र सिर्जनातमक बढी भएकाले सेलाएको जस्तो देखिन गएको होला ।
सविधान संसोधन विरुद्धको एमालेको अडान कायमै रहन्छ वा फेरबदल हुन्छ ,तपाइलाई के लाग्छ ?
नेकपा एमालेले राष्ट्रियता ,जन-जिविका र लोकतन्त्रको निम्ति कसैसंग कुनै पनि खालको सम्झौता गर्दैन । बरु, सगरमाथा ढल्ला तर एमालेको अडान ढल्दैन । कमरेड केपी ओलीको अगुवाइमा एमाले निकै अगाडि बढीसकेको छ । राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नका लागि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का एमाले गर्दैन । संविधान संसोधनको नाममा मुलूकको अखण्डता,स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई समाप्त पार्ने अडानमा एमाले छ ।
केही समयअघि काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पहिले आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिले आएर नमान्ने ? भनेर लगाएको आरोप उहाँको दावी मात्रै हो वा सत्य, के हो ?
कहाँ हस्ताक्षर गरियो , केमा हस्ताक्षर गरियो र कहिले हस्ताक्षर गरियो ? प्रमाण छ उहाँसंग ? यस्ता बतासे कुराको कुनै अर्थ छैन । मुलुकलाई विभाजन,विखण्डन र विदेशीको योजना अनुसार चलाउन पाइदैन भनेर चिन्ता गर्ने हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष ,जस्ले जनताको मन जितेर एक राजनेताको रुप धारण गरिसक्नु भएको छ, उहाँमाथि लगाइने यस्ता आरोपहरुमा कुनै सत्यता छैन ।
के यो संसोधन प्रस्ताव जनता र मुलूकको हितमा ल्याइएको छ र ? यो त भारतको साउथ ब्लकमा बसेर बनाइएको योजना हो । त्यस कारण देउवा र प्रचण्डहरु के भन्छन् भन्दा पनि नेपाली जनताहरु के भन्छन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । आज सिमाङकनका विषय ल्याउनु, पाचँ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने कुरा ल्याउनु नेपालमा जवरजस्त बहु राष्ट्रियता लाद्ने कुरा होइन र ? यहाँ तराई मधेशको एउटा र हिमाल पहाडको अर्काे राष्ट्रवाद बनाइन खोजिदैछ । यो ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो’ जस्तो भइरहेको छ ।
अहिले तपाईले भने जस्तै देउवा र प्रचण्डहरु साँच्चिकै राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा लागिरहेका हुन् त ?
”उहाँहरुको एउटै उद्देश्य केवल सत्ता हो र कुर्ची हो । उहाँहरु कुर्चीको निम्ति जे पनि गर्न थाल्नुभएको देखिएको छ । शेर बहादुर देउवा काङ्ग्रेसको सभापति निर्वाचित हुने वित्तिकै युवासंघ नेपाल मेरै नेतृत्वमा उहाँलाई बधाई दिने क्रममा हामीले उहाँलाई नेपालको नक्सा उपहार दिएर भनेका थियौ की, विगतमा तपाईको निधारमा प्रजातन्त्रलाई लिएर दरबारलाई बुझाएको कालो धब्बा लागेको छ अब तपाईले सके नेपाललाई टिस्टा काँकडासम्म पुर्याउने प्र्यत्न गर्नुहोला नसके नेपालको नक्सा तलमाथि पर्न नदिनु होला भनेर शुभकामना दिएका थियौं। तर, विगतमा सुरासुन्दरी काण्ड, बैकक जस्ता काण्ड मच्चाएर सत्ताको लागि मरि मेटेर नलाग्नु होला भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर, आज आएर उहाँहरु सत्ताको लागि मुलूकको राष्ट्रियतालाई नै साट्न खोजिरहनु भएको छ । यसलाई रोकिन्छ ।”
नेपालको राष्ट्रियताको सवाल यति संवेदनशिल भइरहेका बेला युवासंघ नेपाल के गरिरहेको छ त ?
के गरिरहेको छैन भन्नोस् न ? राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सबैभन्दा बढी हामीले नै गतिविधी संचालन गरिरहेका छौं। अहिले मात्र होइन, संविधान बनिसकेपछि यसविरुद्ध केही मधेशवादी दलहरुले मधेशमा आन्दोलन गरे र अरु पार्टीका कार्यकर्ता मधेश आएमा दुई इन्च घटाइदिन्छौ समेत भने । तर हेर्नुस्, आज तिनीहरु कसरी साइजमा आए यो सब युवासंघकै सक्रियताले हो । विभिन्न राजनितिक पार्टीका कार्यलय तोडफोड गर्ने,आगजनी गर्ने काम उनीहरुले गरे तर, हामी आफ्ना कार्याक्रमहरु लिएर तराइका २२ वटै जिल्लामा गयौँ । तरार्इमा ठूला–ठूला सभाहरु आयोजना गर्यौं । यहीबीचमा हामीलाई ‘हरिवनसम्म आउने हिम्मत त गर’ भन्ने राजेन्द्र महताेहरू युवा संघ मधेशमा पुग्नासाथ दिल्ली भागे यसरी हामीले मधेशमा मात्रै होइन संवेदनशिल बनि रहेको समग्र राष्ट्रियताको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छौं । विगत चार महिनादेखि हामी निरन्तर जनताको माझमा जागरण ल्याइरहेका छौं।
एउटा व्यक्तिगत प्रश्न गरौं , आज युवासंघ नेपालको यो कुर्चीमा बसेर राष्ट्रियताका पक्षमा यसरी अडान लिइरहेको राजिव पहारीसंग कालान्तरसम्म यही अडान कायम रहन्छ वा रहदैन ?
राष्ट्रियता , जनजिविका र लोकतन्त्रका लागि अहिले मात्रै होइन, बाचुन्जेल राजिव पहारीको यो अडान कायम रहन्छ , यसमा कुनै शंका छैन । अझ राजिव पहारी मात्रै होइन सिङ्गो युवासंघ नेपाल र यसमा आवद्ध देशै भरिका युवासंघका हरेक सदस्यको यही अडान छ । अहिले पनि तराई मधेशमा कोही नगएको बेलामा युवासंघ राष्ट्रियताको बहस चलाइरहेको छ । हामी कुनै लहडमा रहरले यो भनिरहेका छैनौं की वर्तमान समयको गाम्भीर्यता राम्ररी बुझेका छौ ।
त्यसो भए कुर्चीका लागि एमाले आन्दोलन गरीरहेको छ भन्ने आरोप सत्य होइन ?
अब सत्ताको निम्ति कुर्चीमा ‘जुका झैं’ टाँसिइरहने र अझ कुर्चीका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिहरुले के आरोप लगाउँछन् त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन । प्रमुख कुरा कुन राजनीतिक पार्टीको र मुलुकको कुन नेताले कस्तो अडान लिएर के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ जनताको अगाडि घाम जतिकै छर्लङ्ग छ ।
यदि साँच्चिकै एमाले नेतृत्वको सरकार टिकाउन मात्रै चाहेको भए देउवा र प्रचण्ड जस्तो एक दुई वटा नाजायज सम्बन्ध विदेशिसंग गाँसे पुगिहाल्थ्यो नि, हाम्रो सरकारले लोकप्रिय बजेट ल्यायो, लामो समयसम्म भारतले होल्ड गरी राखेको हुलाकी राजमार्ग शुरुवात गर्न खाज्यो,व्यापार पारवहन सम्झौतामा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्यो र चीनसंग व्यापार सम्झौता गर्यो । यसरी जनता र मुलुकको हितमा एमाले सरकारले काम गर्न थालेपछि देशी विदेशी शक्तिहरुले त्यो सरकार ढालेका थिए ।
“तपाई माओवादीको पार्टी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ सहीदको पंक्तिमा लामबद्ध हौं भन्ने कोटेशनहरु देख्नुहोला र त्यहाँ प्रचण्डपथको निम्ति मार्न र मर्न तयार हौं लेखिएको होला । प्रचण्डपथ भनेको के हो भने धक्का, क्रमभंग, महाविपत्ति, छलांग र कब्जा । हामी के भन्छौं, सिद्धान्त र विचारको जन्म मानिसको जीवनलाई सम्बृद्ध र उन्नत बनाउन हुन्छ । यदि कुनै पनि विचार वा सिद्धान्तले जीवन सम्बृद्ध बनाउँदैन भने त्यो सिद्धान्तको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । गतिविधीहरुलाई अन्त्य गर्ने अडानमा एमाले छ ।”
दिनहुँ हजारौं युवाहरु विदेशिनु परिरहेको सन्दर्भमा तपाईहरु लगायतका युवा संगठनहरुले खासै बास्ता गर्न नसकेको देखिन्छ । किन यो समस्यालाई महत्वका साथ हेरिदैन ?
हो, प्रत्येक दिन १७०० नेपाली युवा विदेशिइरहेका छन् । त्यसप्रति हामी निकै गम्भीर पनि छौं । युवा एवं नेपालकै कारण युवा मन्त्रालय, युवा परिसर, युवा स्वरोजगार कोष स्थापना लगायतकै अवधारणहरु हाम्रा अवधारणाहरु हुन् । कुनै पनि नेपाली विदेशिएको रहरले होइन बाध्यताले हो , त्यो पनि हामीलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसकारण नेपालका आम युवाहरु अब उत्पादनमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर एउटा नारा अगाडि सारेका छौं – “जहाँ युवा त्यहाँ युवासंघ, जहाँ युवासंघ त्यहाँँ उत्पादन ।” अब हरेक युवाको सीप, ज्ञान र दक्षतालाई रोजगारीसँग “टाइअप” गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसैले हामीले आफ्नै नेता र कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक रोजगारमा लाग्न प्रेरित पनि गरिरहेका छौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जे जति बजेटमा युवामुखि कार्यक्रम र योजनाहरु ल्यायो त्यहाँ काहीं न कहीं हाम्रो भूमिका छ ।
युवा संघमा गुण्डागर्दीको आकर्षण बढेको आरोप लगाउनेहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
नेपालमा युवासंघ मात्रै त्यस्तो संगठन हो जहाँ कुनै पनि साधारण सदस्य पनि फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा स्वतः उसको सदस्यता खारेज हुन्छ जुन, हाम्रो विधानमा उल्लेख छ । त्यसैले युवासंघको हरेक सदस्य उच्च नैतिकता, उच्च आँट र उच्च साहस सहित आन्दोलन सहभागी भएको हुन्छ । म त्यस्तो आरोप लगाउनेहरुलाई हाम्रो ८ लाख सदस्यमा कुनै एकजना फौजदारी अभियोग लागेको देखाउन चुनौती दिन्छु । त्यसैले आरोप लगाउन सजिलो होला तर प्रमाणित गर्न गाह्रो छ । युवासंघ नेपालसँग राजनैतिक र वैचारिक रुपमा परास्त भएकाहरुले लगाउने आरोपको कुनै तुक छैन ।
प्रतिस्पर्धामा नसकेपछि लगाइने आरोपको के खण्डन गर्नु र ? एउटा डाँडामा बसेर रुन्चे र पिचासे खालको आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । अन्य संघ संगठनहरु त गतिविधि र काममा म देख्दिन । तर कहिलेकाँहीं कार्यक्रम हुँदा म फलानो संगठनको अध्यक्ष भनेपछि ए अरु संगठनहरु पनि हुन कि क्या हो जस्तो लाग्छ । संगठन भएका भए त राष्ट्रलाई , लोकतन्त्रलाई संज्ञा परेकाबेला देखिंदा हुन् । त्यस कारण गतिविधि क्रियाशिलता र भूमिडाँडा हिसाबले नेपाली युवाहरुको साझा संगठन युवा संघ नेपाल कै हो । हाम्रो आलोचना पनि भएको सुन्छु, यसमा के भन्छु भने कसैले खिराको रुखमा ढुंगा हान्दैन हेर्नोस किनभने त्यहाँ केही हुँदैन, जसले पनि ढुंगा हान्दा लटरम्म फलेको रुखमा हान्ने हो किनभने त्यहाँ केही हुन्छ । त्यसैले युवासंघको बुुद्धि कसैले गर्ने आलोचना स्वभाविक लाग्छ ।
तपाईको विचारमा नेपालको युवा आन्दोलन सफलताको मार्गमा अघि बढिरहेको छ वा अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ ?
परिवर्तित परिवेश अनुसार अझै पनि युवा आन्दोलन अघि बढ्न नसकेको सत्य हो र त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । हिजो र आज परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । जतिसुकै भन्नोस, अब अधिकार प्राप्तीको आन्दोलन समापत भयो र यतिबेला राष्ट्रियताको सन्दर्भमा युवाहरु गोलबन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले अबका हाम्रा गतिविधिहरु सम्बद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कुराहरुतिर केन्द्रित हुनपर्दछ जस्तो लाग्छ । अझैपनि हामी संरक्षण कालमै हौं र जसलाई लामो समय जान दिनुहुँदैन ।
अब हामी उत्पादनसँगै सिर्जनासँग र रोजगारीसँग जोडिएरै अगाडि बढ्नुपर्छ यतिबेला नेपालको युवा आम्दानेलनमा ऐतिहासिक यु टर्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हिजो अधिकार प्राप्तीका लागि लडियो , आज रोजगारीका लागि आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था छ । दोश्रो, अहिले नेपालमा अशिक्षित युवा रोजगारभन्दा शिक्षित युवा वेरोजगारको संख्या बढेको छ, यसले युवाहरुमा डिप्रेसन समस्या बढाउने संकेत छ जुन मुलुकका लागि भयंकर खतरा हुन सक्छ ।
नेपालमा डिग्रीको गोड मेललिष्ट खाडी मुलुकमा १५-२० हजारको डाममा दौडिनुपर्ने जुन लाजमर्दो समस्या छ, यसको अन्त्य आवश्यक छ । युवासघ नेपालका युवाहरुको योग्यता, क्षमता, ज्ञान र सीपको उच्च मुल्यांकनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । त्यसैले योग्य युवाहरुको सहभागितामा सम्बद्ध नेपाल कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ कार्यदिशा युवा आन्दोलनका लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।
वामपन्थी खेमाकै एउटा धार र सत्तापक्षमै रहेकाहरुले महाकाली नदीसम्बन्धी सन्धी जस्तो राष्ट्रघात गरेको एमालेले अहिले राष्ट्रवादको कुरा गरेको कत्ति सुहाएन भन्छन् नी ?
वास्तवमा महाकाली सन्धी त्यो समयको आवश्यकता थियो । त्यो राष्ट्रघाती सन्धी हो भन्ने कुरा म मान्दिन । त्यो कार्यान्वयन भएन र त्यसैकारण त्यसका नाफा के थिए र घाटा के थिए थाहा हुन सकेन । त्यही सन्धी हो जसले नेकपा एमाले पार्टी फुटायो र जसको इतिहासले वस्तुनिष्ठ समिक्षा पनि गर्ला । तर, मेरो कुरा के हो भने न्वारनदेखिको बल लगाएर त्यो सन्धी पास गराउन चाहने काँग्रेसले त्यो भन्न सुहाउँछ ? आफ्नै प्रस्ताव एमालेले गर्यो भन्न काँग्रेसलाई लाज लाग्दैन ? काँग्रेसले जुन थालमा खायो त्यही थालमा आचीगर्न कसरी सकेको ? राष्ट्रवादको कुरा गर्दा हामी मण्डले राष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादका विरोधी हौं । हामी प्रगतिशिल राष्ट्रवादमा विश्वास गर्छौं ।
एमालेलाई लाग्ने गरेको ‘युरो कम्युनिज्म’को आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । हामी माक्र्सवादलाई विज्ञानको रुपमा आत्मसात गछौं । जननेता मदन भण्डारीले भनेजस्तै सिद्धान्त सिद्धान्तको लागि होइन, सिद्धान्त जीवनका लागि हो । यदि कुनै पनि सिद्धान्तले मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दैन भने त्यो सिद्धान्त र विचारको अर्थ छैन । माओवादी र हाम्रो सिद्धान्तबीच यहिंनेर फरक छ । उसले सिद्धान्तको लागि जीवन हो भन्छ, हामीले जीवनको लागि सिद्धान्त हो भन्छौं ।
तपाई माओवादीको पार्टी कार्यालयमा जानु भयो भने त्यहाँ सहीदको पंक्तिमा लामबद्ध हौं भन्ने कोटेशनहरु देख्नुहोला र त्यहाँँ प्रचण्डपथको निम्ति मार्न र मर्न तयार हौं लेखिएको होला । प्रचण्डपथ भनेको के हो भने धक्का, क्रमभंग, महाविपत्ति, छलांग र कब्जा । हामी के भन्छौं, सिद्धान्त र विचारको जन्म मानिसको जीवनलाई सम्बृद्ध र उन्नत बनाउन हुन्छ । यदि कुनै पनि विचार वा सिद्धान्तले जीवन सम्बृद्ध बनाउँदैन भने त्यो सिद्धान्तको अर्थ छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
तपाई हामीले इतिहास हेर्दा कालमार्क्र्सले विश्वभर एकैचोटी समाजवाद स्थापना हुन्छ भनिरहेका बेला लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति मार्फत रसियामा मात्रै समाजवादको स्थापना गरे तर, त्यो व्यवस्थालाई समान्य ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदा ७५ वर्षपछि त्यो सत्ता ढल्यो । किनभने त्यहाँ समाजवादी व्यवस्थाका नाममा रसियाको कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुने वित्तिकै रोटी र खानाको लागि सर्वसाधारणलाई लाइन लाग्नु पथ्र्यो यसै कारण त्यहाँ वर्ग छुट्टियो ।
नेपालमा हामी प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्न चाहन्छौं । ज.ब.ज भनेकै नेपालको परिस्थिति बमोजिम माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग हो । हामी वेइजिङ्ग वा युरोपतिर पानी पर्यो भन्दैमा यहाँ छाता ओड्ने खालका कम्युनिष्ट होइनौं । यहाँकै परिस्थितिअनुसार हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं । त्यसरी हामी अघि बढ्दा कसैले युरो कम्युनिजमको कुरालाई आत्मसात ग¥यो भन्छन् भने त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।
तपाईको पार्टी अध्यक्षले केही दिनअघि ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ वटा प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नु भयो , खास के हो ? जनमत प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि हो ?
एमालेले जनमत क्यास गर्ने काम गर्दैन र अझ भनौ भोटको राजनीति हामीले गर्ने होइन । हाम्रो प्राथमिकतामा सस्तो लोकप्रियता पनि पर्दैन । नेकपा एमाले आफ्नो काम, र भूमिकामा विश्वास गर्ने पार्टी हो । जनताको भावनात्मक सम्बन्धको मुल्यांकनका आधारमा ५ वटा प्रदेश बनाउँ भनिएको हो । तराई, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रमा होस् । नेपालीपनमा धक्का नलागोस् र विदेशीहरुलाई गिद्देनजर लगाउन सजिलो नहोस् भनेर हामीले यो कुरा उठाएका हौं । मेरो कुरा पनि यही हो ।
युवा संघ नेपालको आन्तरिक जीवनबारे बताईदिनु हुन्छ कि ?
यतिबेला युवसंघ नेपालको ध्यान सबैभन्दा बढी राष्ट्रियताको सन्दर्भमै केन्द्रित छ । हामीले केही मधेशवादीले मधेशमा रोप्न खोजेको विभाजनको विउ उखेल्न मधेश संवाद कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । देशका १७५ भन्दाबढी जिल्ला, क्षेत्र र नगर कमिटीहरुका अधिवेशनहरु सम्पन्न भएका छन् । पार्टीको मोर्चा संगठन विभागले तोकेको समयमा हाम्रो महाधिवेशन हुनेछ । एकदमै संस्थागत ढंगबाट काम गरिरहेका छौं । तर युवा संघको विधानलाई नेपालको संविधान अनुसार ‘टाइ अप’ गर्न बाँकी छ त्यो पनि चाँडै गर्छौं ।
अन्त्यमा, संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन विधेयक संसदबाट पारित भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
यदि कसैले ‘आफ्नै आमालाई वलात्कार गर्यो’ भने के गरिन्छ ? यो हाम्रो मातृभूमिमाथिको दिन दहाडै गरिएको बलात्कार हो । युवासंघ नेपाल र नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन । जे गर्नुपर्छ गर्छौं ।